Mpamatsy varotra sy orinasa | Mpanamboatra varotra China
AngelBiss koa dia manome karazana serivisy fitsaboana isan-karazany.
Raha COPD ianao, na manana ireto soritr'aretina manaraka ireto, toy ny tsy fahampian'ny taovam-pisefoana, ny fofonaina ary ny soritr'aretina apnea. AngelBiss dia afaka manome fitaovam-pisefoana an-trano - Auto CPAP / BIPAP, izay hanatsara ny fiasan'ny rivotra mba hitazomana ny lalan'ny lalan-drivotra ary hitandrina ara-dalàna ny fifohana rivotra.
Raha manana loholona na mararin'ny fiakaran'ny tosidrà ao an-trano ianao, dia tena ilaina tokoa ny fanaraha-maso ny tosidra. Tena mety ny manara-maso ny fahasalaman'ny fianakavianao. AngelBiss dia manana karazan-vokatra telo isan-karazany ho an'ny safidinao: vahaolana ambony momba ny tsindry ambony rà ambony, fanaraha-maso tosidra elektronika amin'ny tànana ary fanaraha-maso ny tsindry rà.
Raha sendra sery ianao, kohaka, na marary tenda, rhinitis, tonsillitis, na asma, dia asaina mampiasa fitsaboana inhalation compression ianao.
Avy eo dia mila fitaovana Nebulizer voafintina ianao, AngelBiss dia hanome fahafaham-po ny filanao. Tsy ny nebulizer ihany no noterentsika ho an'ny olon-dehibe, fa ho an'ny zaza tsy mitovy karazana aminy koa.
Raha tianao dia azonao atao koa ny mahita thermometer elektronika ara-pahasalamana amin'ny katalaogin'ny vokatra AngelBiss. Miaraka amin'ny kalitao tsara indrindra sy ny vidiny mirary.
Raha mila fanontaniana na fampahalalana bebe kokoa momba ny AngbelBiss, azafady mifandraisa aminay amin'ny info@angelbisscare.com.
Ny AUTO CPAP / BIPAP dia malefaka, ary mora ampiasaina ary atsangana ary ravana. Izy io koa dia mamela ny fampiasana an-tsokosoko. Izy io dia mitazona ny fiasan'ny orona, ny hamandoana ary ny fanafanana ny orona mba hampihenana ny pnemonia mifandray amin'ny rivotra. Hotazomina ihany koa izy io ny fahaizana mikohaka, mitrandraka ary miteny, ary manatsara ny fampiononana. Mahomby sy azo antoka izy io, ary hisoroka ihany koa ny fahasarotana amin'ny tracheotomy na ny fidiran'ny tracheal.
Fanaraha-maso ny tosidra elektrônika, amin'ny ankapobeny dia mampiasa teknolojia fandrefesana tosika elektronika mandeha ho azy izy ary mampiasa sensor elektronika amin'ny tsindry sy pulsation mba hamantarana ireo tsindry sy tsiranoka amin'ny pulsation, ary haneho azy ireo amin'ny endrika nomerika mba hampisehoana ny tosi-dra systolika, ny tosidra diastolika ary ny tahan'ny fitepon'ny fony. koa manana LCD fampisehoana sy microcomputer fanaraha-maso mandeha ho azy. Izy io dia afaka mandrefy haingana sy marina ny tahan'ny tosidranao sy ny tahan'ny fitepon'ny fony. Azonao atao aza ny mijery matetika ny tosidranao sy ny fitepon'ny fony any an-trano amin'ny fotoana rehetra.
Nebulizer voafintina ara-pahasalamana
Ny nebulizers ara-pahasalamana dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretin'ny taovam-pisefoana ambony sy ambany, toy ny sery, tazo, kohaka, sohika, aretin-tenda, pharyngitis, rhinitis, bronchitis, pneumoconiosis ary aretina hafa izay mitranga ao amin'ny trachea, bronchi, alveoli, ary ny tratra . Ny fitsaboana amin'ny inhalation Nebulised dia fomba fitsaboana lehibe sy mandaitra amin'ny fitsaboana aretin'ny taovam-pisefoana. Ny nebulizer dia ampiasaina hanoritana ny fanafody ranoka ho potika kely, ary ny fanafody dia miditra amin'ny lalan-pisefoana sy ny havokavoka amin'ny fifohana rivotra, mba hahatratrarana fitsaboana tsy misy fanaintainana. Ary haingana sy mahomby ny fizotrany.
Vokatra fampitaovana hafa momba ny taovam-pisefoana
Ny efitrano mitazona valva dia karazana spacer izay misy valizy tokana amin'ny vavam-bava. Ity fitaovana ity dia mihoatra ny manome "habaka" eo anelanelan'ny vavanao sy ilay fanafody. Mamandrika sy mitazona ny fanafody anao koa izy io, izay manome fotoana anao haka rivotra sy miadana. Ity dia mamela anao miaina amin'ny fanafody rehetra. Ny valizy tokana dia manakana anao tsy hivoaka anaty rano tsy ampoizina ao anaty fantsona. Efitra mitazona valizy maro no milahatra ao anatiny miaraka amin'ny fonosana manohitra ny static izay manampy amin'ny fitazonana ny fanafody tsy hiankina amin'ny sisin'ny efitrano.
Pulse Oximeter dia afaka manara-maso ny saturation amin'ny oxygen oxygen sy ny mason'ny pulse. Ary misy fampisehoana kisary pulsa ary misy ny famonoana azy mandeha ho azy aorian'ny 8 segondra rehefa tsy misy signal. Afaka maharitra 20ora ny masinina. Izy io koa dia manana fampisehoana fanairana amin'ny alàlan'ny herinaratra ambany.